Coinbase waxay ku bilaabaysaa Dogecoin $ 1.2 milyan oo lacag bixin ah iyadoo qiimaha hoos u dhacayo
Coinbase ayaa ugu dambayntii bilaabay ganacsiga Dogecoin. isweydaarsigu wuxuu u fidinayaa macaamiisha $ 1.2 milyan oo hantidooda ah qayb ka mid ah bilowga .
Ujeedada sarrifka ee ah in la qoro meme-ka ugu caansan, Dogecoin. Tani waxay raacday socodkii cajiibka ahaa ee dhawaanta ee hantida dijitaalka ah iyo sida isweydaarsiyada kale ay uga kasbadeen tartanka tartankiisa mugga ganacsigiisa sare.
Horumarkii ugu dambeeyay, Coinbase waxay si rasmi ah uguxirantahay Dogecoin. Iyada oo qayb ka ah daahfurka, Coinbase waxay macaamiisha u sifeyneysaa $ 1.2 milyan oo hantida ah.
Laga bilaabo Juun 3, wareejinta soo galida ee laga keenay Doge waxaa loo oggolaaday Coinbase Pr o. Sida laga soo xigtay Coinbase
, ka ganacsiga Doge-USD, Doge-BTC, Doge-EUR, Doge-USDT iyo Doge-GBP ayaa lagu bilaabay saddex waji tan iyo intii sahaydu waa ku filan tahay barxadda. Wejiyadawaa boostada kaliya, xaddidan-kaliya iyo ganacsi buuxa.
Armstrong ayaa horay shaaca uga qaaday in kudarista hantida ay tahay mudnaanta koowaad ee Coinbase. Sababtaas awgeed, waxay ku dadaalayaan inay dadajiyaan xawaaraha liistada hantida ee madasha. Wuxuu qirtay inay qaadatay muddo in lala socdo hantida badan ee maalin walba lagu daro dhaqaalaha loo yaqaan 'crypto currency'. Sida loo galo tartanka Si aad u hesho fursad aad ku guuleysato, kaqeybgalayaashu waa inay marka hore iibsadaan ama iibiyaan ugu yaraan $ 100 ee Dogecoin on Coinbase kahor Juun 6 2021. The guuleystaha kowaad wuxuu Doge ka heli doonaa $ 300,000. Intaas waxaa sii dheer, 10 guuleyste oo kale ayaa midkiiba Doge ka heli doona $ 30,000, ka dibna 6,000 oo guuleystayaal ayaa sidoo kale Doge ka heli doona $ 100. Ku guuleystayaasha waxaa lala xiriiri doonaa laga bilaabo Juun 17-keeda. Tartanku wuxuu ku kooban yahay hal gelitaan qofkiiba. Waxyaabo badan oo la soo geliyay ma kordhin doonaan fursadaha lagu guuleysto sida ku cad Coinbase.e firfircoonaan Coinbase.com.
Falcelinta qiimaha Dogecoin
Sida lafilayo, ku dhawaaqida waxay abuurtay dareen wanaagsan suuqa, iyadoo riixeysa qiimaha sare $ 0.42 in kabadan 24 saacadood. Si kastaba ha noqotee, sicirka ayaa hoos uga dhacay 13% maalintiisa sare si loogu ganacsado $ 0.36. Qaar ka mid ah maalgashadayaasha ayaa wali ku sii xoogaysanaya Doge.
Qiyaasta ganacsigu wali hoos ayey u sii dhaceysaa 28% 24-kii saac ee la soo dhaafay iyadoo ay suuqa ku jirtay 2.8%.